TAAS DARINIMO MA AHA! Taageereyaal ka soo kala jeeda Brazil iyo Argentina oo kulan Tennis ah isugu gacan qaaday+SAWIRRO – Gool FM
TAAS DARINIMO MA AHA! Taageereyaal ka soo kala jeeda Brazil iyo Argentina oo kulan Tennis ah isugu gacan qaaday+SAWIRRO
Kaafi August 9, 2016
(Rio) 09 Agoosto 2016. Waxaa Rio ka dhacday arin ARGAGAX ah kaddib markii taageere Argentinian ahaa oo daawanayey Tennis-ka ay feer is kala daaleen mid kale oo reer Brazil ah kaddib markii ay carradooda heer sare gaartay kulan ka tirsanaa Rio Olympics.
Booliska sida Militariga u tababaran ayaa soo fara galiyey daawadihii Argentineeska ahaa kaas oo feerka ka hadlayey kahor in aysan hareereen dadweynihii maxaliga ahaa.
Mid kale ayaa isku dayey in uu qaska sii shido markii uu calanka Brazil oo agtiisa yaala ku FALAADO laakiin taageere kale oo Argentiinees ah ayaa ka celiyey falkaas kahor inta aysan Booliiska soo galin.
DAAWO: Muuqaal laga soo qaaday gudaha daarta qolalka labiska ee Wembley iyo sidii uu Suarez u dhaqmay markii uu arkay saaxiibadiisii hore!+SAWIRRO
Pedro Rodriguez oo looga ganacan haatinayo Valencia